မွန်ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် ဘာသာမန် ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
၆ အသံ ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ
၇ နာမ်များ နှင့် နာမ်ပုဒ်များ
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မွန်ဘာသာစကားသည်အ​နော်ရထာ​ခေတ်​နောက်ပိုင်း​ပေါ်​ပေါက်လာ​သော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အေဒီ ၁၂ ရာစု တိုင်​နှောင်းပိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း အောက်ပိုင်း တောင်ကြား မွန်မင်းနေပြည်တော်များ အတွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၀၅၇ ခုနှစ်တွင် မွန်တို့သည်ခမာတို့ကိုစစ်ရှုံး၍ သထုံသို့နေပြည်တော် ရောက်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာပြည်၌ စတင်သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်သာ်။ ဘာသာစကားဖြစ် ခဲ့သည်။ ပုဂံဘုရင်ကျန်စစ်သားမင်း(၁၀၈၄၁၁၁၂)သည် မွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးခဲ့ပြီး မွန်ဘာသာစကားကိုအားပေးချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာစာပေအရေး အသား ခိုင်မာရှိ​နှင့်​နေပြီးဖြစ်ကာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနှင့်မွန်ဆက်သွယ်​ရေးလွယ်ကူ​စေရန်နှင့်လူနည်းစုမွန်လူမျိုးတို့အားအား​ပေးချီး​မြှောက်ရန် ကျန်စစ်သားမင်းသည် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော များစွာသော ကမ္ဗည်းကျောက်စာများကိုထားရစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ပါဠိ၊ ပျူ၊ မွန် နှင့် မြန်မာစာတို့ဖြင့် မျက်နှာလေးဖက်တွင် အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်ကြောင်း တစ်ခုတည်းကို ဖော်ပြရေးသားထားသော ရာဇကုမာရ် ရေးထိုးခဲ့သော မြစေတီကျောက်စာကို ထွင်းခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်စစ်သားမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် မွန်ဘာသာစကား အသုံးပြုမှုမှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ မွန်နှင့်ပျူတို့အစားရှေးဗမာဘာသာစကားကို ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင်ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား အဖြစ် စတင် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဥပမာမှာ အသံလေးလေးထွက်ရန် သရအက္ခရာပေါ်၌ ဖော်ပြထားသော အမှတ်အသား ဖြစ်သည်။
နာမ်များ နှင့် နာမ်ပုဒ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှ ဘာသာစကားများကဲ့သို့ မွန်ဘာသာစကားတွင် အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းများရှိပြီး ကိန်းဂဏန်းများနှင့် တွဲဖက် ပေါ်ထွက်လာသော နာမ်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစားသတ်မှတ် ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ နာမ်ပါဝင်သော စကားလုံးများနှင့် ဝါကျများ၏ အဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်သည်။
ဟုတ်သည်-မဟုတ်ပါ မေးခွန်းများကိုဝါကျအဆုံးစကားလုံး ဟ ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
Wh မေးခွန်းများဟုခေါ်သော ဘာကြောင့်ဟူသော အကြောင်းပြ မေးခွန်းမျိုးကို မတူညီသော ဝါကျအဆုံးစကားလုံး ရောင် ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အမေးဝါကျ စကားလုံးတို့သည် Wh မေးခွန်းစာလုံးများနှင့် အတူတွဲနေရန်မလိုပေ။ အဓိပ္ပယ်မှာ ၎င်းမေးခွန်းစာလုံးကို ဝါကျရှေ့၌ထားရန်မလိုအပ်ပေ။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Mon"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Old Mon"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ South၊ Ashley (2003)။ Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake။ Routledge။ ISBN 0-7007-1609-2။
↑ Moseley၊ Christopher (2010)။ Atlas of the World's Languages in Danger (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ UNESCO။ ISBN 978-92-3-104096-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွန်ဘာသာစကား&oldid=703828" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။